बेलायती राजकुमार हृयारी लामो समय किन नेपाल बस्न चाहन्छन् ? – Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / समाचार / बेलायती राजकुमार हृयारी लामो समय किन नेपाल बस्न चाहन्छन् ?
बेलायती राजकुमार हृयारी लामो समय किन नेपाल बस्न चाहन्छन् ?
चैत ११। चैत ६ गते नेपाल आएका बेलायती राजकुमार हृयारीले आफ्नो नेपाल बसाई लम्क्याएका छन् । उनी नेपाल अझै ६ दिने बस्ने भएका छन् । उनी छ दिन नेपाल बस्दा उनको नेपाल बसाई १२ दिनको हुने छ । विदेशी विशिष्ठ व्यक्ति यसरी समय थप गरेर नेपाल बसेको सायद यो पहिलो हो । उनी बाँकी थप गरेको ५ दिन स्वयमसेवक भएर भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय बनाउन सहयोग गर्नेछन् ।
बुधबार नेपालस्थित बेलायती दूताबासमा आयोजित कार्यक्रममा हृयारीले यस्तो बताएका हुन् । ‘म तत्काल नेपाल छाड्दै छैन । टिम रुविकनसँग छ दिन विकट गाउँमा विताउनेछु ।’
बेलायती राजकुमार आवद्ध भएको टिम रुविकनले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त समुदायिक विद्यालय बनाइरहेको छ । आफ्नो भ्रमणको अन्तिममा नेपाललाई सहयोग गर्ने मौका पाएकामा खुसी लागेको उनले बताए ।
Previous बर्तिकाको बिम्बाकाश
Next ल्हारक्याल वैरो विभागबाट पनि किन छुटे ३० लाख धरौटीमा, के–छ भित्रि रहस्य ?